May 2009 | လင်္ကာဒီပအရှင်
Labels: adages0comments
ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်ချက်မှာ အနည်းငယ်မျှသာ၊ လိုချင်သောအရာများမှာ အနန္တ။
To be grateful and repay kindness this is first;
ဂုဏ်ကျေးဇူး အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတရားပြန်လည် တုံ့ပြန်ပူဇော်ခြင်းတို့သည် ပထမဦးစွာပြုပါ။
အများအကျိုး ဆောင်ပြုခြင်းသည် ကိုယ့်ကျိုးအောင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အကျိုးအမြတ်၏ နည်းများမတွက်ချက်ဘဲ၊ ဦးစွာစိတ်ရော ကိုယ်ပါ အားထုတ်လုပ်ဆောင်မြှပ်နှံပါ။
မေတ္တာ ကရုဏာ နှင့်ပြည့်စုံသူမှာ ရန်သူမရှိ၊ ဥာဏ်ပညာရှိခြင်းသည် စိတ်၏ ပူပန်နှောက်ယှက်စေခြင်းမရှိ မဖြစ်ပေါ်ပေ။
စိတ်သဘောထားကြီးစေပြီး၊ အတ္တကို နည်းပါးစေရမည်။
Posted by linkardipa-ashin at 5:01 PM
Bhikkhu Pesala _ The Debate of King Milinda
Buddha's way of immortal medicine
Encyclopedia of Children's Health 1
Encyclopedia of Children's Health 2
Encyclopedia of Children's Health 3
Encyclopedia of Children's Health 4
Encyclopedic History of World Civilization 12
Encyclopedic History of World Civilization 13
Encyclopedia History of World Civilization 14
Encyclopedic History of World Civilization 15
Ethics By K.N.Kar (Rangoon University)
Exhortations by Mahasi Sayadaw I
Exhortations by Mahasi Sayadaw II
Gems of Mahasi Thought
Hello-with Lo*Handbook ve and Other Meditations
History of Theravada Buddhism in South-East India
How to Overcome your Difficulities
Index to the Dighanikaya
Knowing & Seeing
Law and Custom in Burmese and the Burmese Family
Mahasi Abroad I
Mahasi Abroad II
Majjhimanikaya Atthakatha I
Majjhimanikaya Atthakatha II
Majjhimanikaya Atthakatha III
Majjhimanikaya Atthakatha IV
Meditation Subjects to Rahula
*Meditation in Southeast Asia (Dieter Baltruschat)
Mindfulness of Breathing &..
PhD Thesis of Myanmar Dr.Sayadaws
Prictical Research Methods
Problem of Knowledge in Yogacara Buddhism
RAJADHAMMASANGAHA (U Pho Hlaing)
Recent Researches in Buddhist Studies
Religion and Philosophy of Veda and Upanishad I
Religion and Philosophy of Veda and Upanishad II
Samannaphalasutta and its Commenteries
Samyutta Nikaya I
Samyutta Nikaya II
Samyuttanikaya Atthakatha I
Samyuttanikaya Atthakatha II
Samyuttanikaya Atthakatha III
*Space Sciences Vol 1
*Space Sciences Vol 2
*Space Sciences Vol 3
*Space Sciences Vol 4
The Bhikkhu Rules-A Guides for Laypeople
The Book of Protection(Paritta)
The Buddha His life and His Teachings
The Chariot to Nibbana I
The Chariot to Nibbana II
The Conditionality of Life in Buddhist Teachings
The Everyday Internet All-In-One Desk
The Golden Mrak-U
The Internet Encyclopedia I
The Internet Encyclopedia II
The Internet Encyclopedia III
The New Pali Course I & II
The Path of Purification_1
The Path of Purification_2
The Seven Stages of Purification and..
The Simile of Cloth and..
The Spread of Buddhism and the Buddhist Schools
The Sutra on the Realizations of the Great Beings
The Sweet Drew of Ch'an
The Teaching of Ajahn Chah
The Truth of The Messengers
TIPATAKA ENGLISH TRANSLATION(metta net)
VINAYA PITAKA VOL II
VINAYA PITAKA VOL III
VINAYA PITAKA VOL IV
VINAYA PITAKA VOL V
VINAYA PITAKA VOL VI
Vipassana Dipani(Ledi Sayadaw)
Ways and Means into Jhanas
With Robes and Bowls
*Working of Kamma
World Buddhist Missinary Tour
Writting and Diffrence
Posted by linkardipa-ashin at 11:49 AM
Labels: myanmar0comments
ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပန္နက်ချပွဲ , ပုံနှိပ်ရေးနှင့်စာရေးကိရိယာဌာန , ၈.၆.၁၉၅၉
နိဗ္ဗာန ဂါမိနီ ပဋိပဒါ-၁
နိဗ္ဗာန ဂါမိနီ ပဋိပဒါ-၂
နိဗ္ဗာန ဂါမိနီ ပဋိပဒါ-၃
နိဗ္ဗာန ဂါမိနီ ပဋိပဒါ-၄
နိဗ္ဗာန ဂါမိနီ ပဋိပဒါ-၅
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် ပါဠိ+မြန်မာပြန်
ပိဋကတ်သုံးပုံ မြန်မာပြန် အစုံ (5.11 MB)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၁ (က)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၁ (ခ)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၂ (က)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၂ (ခ)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၃ (က)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၃ (ခ)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၄ (က)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၄ (ခ)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၅ (က)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၅ (ခ)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၅ (ဂ)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၆
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၇
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၈ (က)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၈ (ခ)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၉ (က)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အပိုင်း ၉ (ခ)
Posted by linkardipa-ashin at 11:39 AM